Afrobasket Women U18 : tanjon’ny ekipa nasionaly ny hiatrika ny manasa-dalana | NewsMada
Afrobasket Women U18 : tanjon’ny ekipa nasionaly ny hiatrika ny manasa-dalana
Mazava. Nambaran’ny Manager Général-n’ny ekipa nasionaly hiatrika ny “Afrobasket Women U18”, Rakotonanahary Ndranto, fa tanjon’izy ireo ny hiatrika ny lalao manasa-dalana. Fifaninanana iraisam-pirenena afrikanina hotanterahina any Egypte, ny faraparan’ny volana aogositra izao sy ny voalohandohan’ny volana septambra iny.
Voalaza mantsy fa efa manakaikikaiky ary efa mirona kokoa amin’ny lafiny siantifika izao ny fanazarantenan’ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa nasionaly sy ny fomba filalaovana eny ambony kianja. Izany hoe, raha ny nambaran’ny Manager Général hatrany, efa miroso tsikelikely amin’ilay fototra izay siantifika ireo teknisianina, nanomboka andro maromaro hanatsarana ny fomba filalaon’ireo mpilalao.
Ankoatra izay, hentitra ihany koa Rakotonanahary Ndranto nanambara fa tsy misy kiantranoantrano izany amin’ny ekipa nasionaly fa izay mahay sy manana tanjaka ara-batana ihany no hijerena ireo mpilalao ary tsy maintsy mandalo fitsapana avokoa izy ireo. “Misy milaza any ambadika rehetra any fa ireo izay manam-bola ihany no tafiditra ho ekipa nasionaly. Izaho eto manambara aminareo mpanao gazety fa ny fitsapana ampanaovinay ihany no hitarafana ireo mpilalao ary izay mahay ihany no milalao”, hoy hatrany ity Manager Général-n’ny ekipam-pirenena ity.
Etsy andaniny, voalaza ihany koa fa efa nangataka tany amin’ny federasiona malagasin’ny basikety (FMBB) ireo teknisianin’ny ekipa nasionaly ny mba tokony hahatongavan’ireo mpilalao malagasy any ivelany iray volana mialohan’ny fifaninanana any Egypte. Mpilalao telo mantsy no voalaza fa hafarana ho avy eto an-tanindrazana hanatevin-daharana, izay ahitana an’i Samantah sy Totofidy Sariaka ary Rabenjamina Mélanie. Mitohy hatrany kosa ny fanazarantenan’ny ekipam-pirenena, izay ahitana mpilalao 17, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina.